Nantsi into eyenzekayo Ukuba Ulahla iFrancis kuManzi
Yintoni eya kuyenzeka Ukuba Ulahla iFrancis kuManzi?
I-Francium iyinombolo yesiqendu 87 kwitheyibhile lexesha. Iqumrhu lingalungiswa ngokuqhuma i-thorium kunye neeponononi kunye nexabiso elincinci kakhulu lwenzeka ngokwemvelo kwiimaminerali ze-uranium, kodwa kunqabile kwaye kusasaza ukuba akuzange kubekho okwaneleyo ukuba kubone oko kuza kwenzeka ukuba iqela liye lahla emanzini. Nangona kunjalo, ngokuqinisekileyo impendulo iya kuba namandla, mhlawumbi iqhube.
Iqonga le-francium laliza kubetha ngaphandle, ngelixa ukuphendula ngamanzi kwakuza kuvelisa igesi le-hydrogen ne-francium hydroxide kunye nobushushu obuninzi. Yonke indawo iya kuba yongcoliswa ngezinto ezinokutsha.
Isizathu sokusabela okuqinileyo sisifo kukuba i-francium yintsimbi ye- alkali . Njengoko uhamba phantsi kwekholam yokuqala yokuqala kwitheyibhile yenkcazelo, impendulo phakathi kweetali ze-alkali kunye namanzi iya kuba nobudlova. Inani elincinci le-lithium liya kuthutha emanzini kwaye litshise. Ukutshisa i-sodium ngokulula. I-Potassium iyahlukana, iyatshisa ngomlilo . I-Rubidium iyatshisa ngelililo elibomvu. I-Cesium ikhulula amandla aneleyo nokuba inxalenye encinci ifuthe emanzini. I-Francium ingezantsi kwe-cesium etafileni kwaye iza kuthatha ngokuthe ngqo ngokukhawuleza kwaye ngokukhawuleza.
Ngoba? Inye nganye yeetali ze-alkali ibonakala ngokuba ne- electron eyodwa ye-valence . Olu khetho lwe-electron luchukumiseka kalula kunye namanye ama-athomu, afana nalawo asemanzini.
Njengoko uhamba phantsi kwitheyibhile yexesha , ii-athomu ziba zikhulu kwaye i-elektron i-valence i-elektron ilula ukususa, eyenza ukuba isakhi siphelele.
Kwakhona, i-francium inomsakazo kulindeleke ukuba ikhulule ubushushu. Uninzi lweempendulo zamakhemikhali lukhawuleza okanye luphuculwe ngamaqondo obushushu. I-Francium yayiza kufaka amandla okubola kwe-radioactive, ekulindeleke ukuba iphakame ukusabela ngamanzi.
Uluhlu lweeLwimi - amagama, ii-Atomic Numeri, i-Element Symbols
Imbali YaseRoma Yasendulo: I-Prefect
6 Imisebenzi yokuPhathwa kweeShishini eziPhakamileyo
Intsingiselo Yomqondiso Wamakhandlela kuYuda
Izinto eziPhambili eziPhambili zokuthabatha kwi-Warped Tour
Imfazwe Yehlabathi II: USS Ukuhlawula (i-CV-35)
IJografi yaseCosta Rica
Amagama amaTshayina angamaBana
I siNgesi ngegrama
Indlela Yokuxelela Abazali Bakho Uhluleka Iklasi Yekholeji
U-Earl Warren, uMgwebi oyiNtloko yeNkundla ePhakamileyo